ပြန်လာရင် ဖိုးချိုသီချင်းလည်း ဆိုပြပါ့မယ် … လို့ :mrgreenn:
ကူညီစရာပေါ်ပေါက်လာရင်လဲ ရွာထဲကဆို လာထားဘဲဗျ ။ ( ကဲ ကဲ ပိုက်ပိုက် သွားချေးကြစို့ :mrgreenn: )
သို့ … ကြောင်ကြောင် ~~~ စာရေးလိုက်ပါရဲ့ ~~ စားတဲ့ပေါင်မုန့်တွေ ~~ ငပိ နဲ့လာပြန် လဲ …… :mrgreenn: အဲ အဲ ဇော်ဝင်းရှိန်သီချင်းနဲ့မှားသွားလို့ :mrgreenn:
ကိုချိုကြီး လို့ ခေါ်တဲ့ ကိုပီချိုကြီးပေါ့ဗျာ။ ကဲ!! ကိုချိုရေ …… စာမရေးတတ်ဘူး လို့တော့ မရှော်ကြေးဗျာ ။ ဆြာသမား ရေးခဲ့တာတွေ ဘယ်လိုညက်တယ်ဆိုတာ မြင်ခဲ့ဖူးသနော အရင်လိုဘဲ ဂွတီး ဂွကျ ကွန်မန့်လေးတွေ လုပ်ပါဦးဗျ ။ ကျနော်လည်း ပြီးခဲ့တဲ့နွေက ပုဂံသွားမယ်လုပ်တော့ ကိုယ့်ဆရာ ရဲ့ပုဂံပို့စ်ကိုပြန်ရှာရသေးဗျာ ။ ဒီရွာထဲ နေရတာတစ်ခုတော့ကောင်းသဗျ ။ လိုအပ်တာလေးတွေရှိရင် ဟိုမွှေဒီမွှေ လုပ်လိုက်ရုံဘဲ ။ မအားတာတွေအားတာတွေ မပြောနဲ့ဦးဗျာ ။ အားရင်တော့ ရွာထဲဝင်ပြီး ပြန်မွှေဦး ။ ဒါဗြဲ :mrgreenn:
အခုလဲ ရွာပြင်ကချောင်းနေတာ ခုတော့ ဆွဲဆောင်မှု ကောင်းလွန်းလို့ ဝင် မန့်ရပြီ :mrgreenn: :mrgreenn:
ကျန်တဲ့သူကြားရင် အထင်လွဲနေပါ့မယ် ကွိ။ အထင်တွေက ဇွတ်ကို လွဲချင်နေကြတယ်။ :mrgreenn:
စီကနဲဆို ဇီဇီခင်​​ဇော်​ပဲကွ… :mrgreenn: ဇီဇီခင်​​ဇော် ပြီးဂင် စီစီခင်​​​​ဇော်​​ပြောင်း… :)) ​သေချာမဖတ်​ရ​သေး မယ်​​သော့အညွန်း ဘ​ရောက်​စာနဲ့ဖတ်​တာ အမဲစာရွက်​​ပေါ် အပြာ… အနီစာ​တွေဖတ်​​နေရတယ်​… :'(
ဒါမဲ့လည်း ဆက်ရေးအူးမှာပဲ။ ခိခိ။ :mrgreenn:
အရီး ကမ်ပနီ ဆိုရင် သများကို ထမင်းနပ်မှန်အောင်သာ ကျွေးပါ။ လာခဲ့ပါ့မယ်။ :mrgreenn:
အဲဒီမျက်မှန်ကလည်း ချွတ်စွတ်။ သော် ကို ရန်အောင်ပုံပဲ ထည့်လိုက်လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ခိခိ။ :mrgreenn:
(၅) ကပေါက်ကြီး ကို တစ်ခါတစ်ခါ တစ်အားနောက်ချင်တာ။ ကောက်ပို လို့။ ချိတ်ချိုး မစိုးလို့။ :D အမှန်က နောက်တာ ခင်လွန်းလို့ ပါနော။ ချစ်ချာကြီး ။ အစ်မပေါက် ကို မေးကြည့်လေ။
အမ်..ဂိမ်းဆော့ရတာ မကြာသေး..ဂဇက် ထဲတောင် ရောက်လာပါပေါ့..သများ ပြောဘူးနော်..အာ့တွေ..ဒါမယ့် ဆွိ နဲ့ဆာအကြောင်းတော့ သိသွားပြီ :mrgreenn:
တစ်ဦးချင်းကို မွှေထားလိုက်တာ…ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင် ကိုယ့်အကြောင်းအဲ့လောက်မသိဘူး…ခစ် :mrgreenn: အခုပထမပိုင်းဗျူးထားတဲ့လူတွေထဲ ကျုပ်နဲ့မဆုံဖူးသေးတာဆိုလို့….
ချစ်စရာအတွေးနဲ့အရေးကို တစ်ယောက်မကျန် ပြုံးပြုံးလေး ဖတ်သွားပါတယ်လို့..နှင်းနှင်း ပျောက်နေတာ ကျောက်စ်ကို အလိုလို ရှိန်နေလို့ပါ အစ်ကိုဆာရယ်.. :mrgreenn: